LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
အဆိုပါစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြ LG ကယနေ့အထိဖန်ဆင်းတော်မူပြီကိုအကောင်းဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းစျေးအကြီးဆုံးင်နှင့်၎င်း၏ပုံစံလက်ဖက်ရည်လူတိုင်း၏ခွက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာဆက်ဆက်ပိုကြီးတဲ့လက်ကောက်ဝတ်အကိုက်ညီဆုံး. သငျသညျဝယ်ခင်ကြိုးစားရန်တစ်ခုမှာ.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြပြန်လည်သုံးသပ်: ကြီးမားသော, ရဲရင့်ခြင်းနှင့်တစ်နည်းနည်း gaudy” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 14 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 08.50 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြမှာတစ်နှစ်အောက်မှာအတွက်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏တတိယစမတ်နာရီဖြစ်ပါသည်, တောက်ပ, သတ္တု-ဖုံးလွှမ်း, ပတ်ပတ်လည် Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Android Wear လက်ပတ်နာရီ - နှင့်စျေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်အတူ.
မြို့ပြ၏ chunky တစ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည် G Watch R ကို ၎င်း၏ 1.3in ပလပ်စတစ် OLED မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပါရန်နှင့် LG ရဲ့ဒုတိယအကျော့စမတ်နာရီ.
ဒါဟာ Google ရဲ့အသစ်နှင့်အတူတင်ပို့ဖို့ပထမဦးဆုံးလက်ပတ်နာရီသည် Android Wear 5.1, ထိုဝတ်ဆင် operating system အတွက်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းရာဖြစ်ပါသည်.
• Android Wear 5.1 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ရိုးရှင်းပြီး, အသုံးဝင်သောနှင့်အကောင်းဆုံး - ယခုအဘို့
အဆိုပါစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြကြီးဖြစ်ပါတယ်, chunky လက်ပတ်နာရီ, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအလတ်စားလက်ကောက်ဝတ်နှင့်သေးငယ်တဲ့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ပုံ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကြီးမားသော. Chunky. တောက်ပသော. Gaudy. ဤမြို့ပြမှာပစ်ချခံရနိုင်သမျှသော adjective နာမဝိသေသနတွေဟာ. ဒါဟာငါကိုအသုံးဖို့အပျော်အပါးခဲ့ဖူးတဲ့အကြီးဆုံး Android Wear စမတ်နာရီဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ထက်အမှန်တကယ်သေးငယ်သည်ပင်သော်လည်း 1.6Motion မှာ 360.
နာရီပတ်ဝန်းကျင် frame ကိုတောက်ပသံမဏိဖြစ်ပါတယ်, ပန်းရောင်ကိုရွှေသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုအတွက်. ငါတစ်ပါတ်အတွက်အပန်းရောင်ကိုရွှေဗားရှင်းစမ်းသပ်ခဲ့ကြရတယ်. ဒါကြောင့်ထွက်ရပ်ဆိုတခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြဖြစ်ပါသည်.
သို့သော်, တကလက်ပတ်နာရီအဘို့လည်းလွင်ပြင်င်, ဒါကြောင့်နေရတယ်လို့နှင့်ထူးခြားကြည့်ရှုစေသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသေးစိတ်တစ်ဦးမရှိခြင်းနှင့်အတူ. အဆိုပါလုပ်ကွက်ပန်းရောင်ရွှေကိုတစ်နည်းနည်း gaudy ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်, ဒါပေမယ့်ငါကရှေးခယျြမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်, ငါကဖို့အသုံးပြုစိုက်ပျိုးကြပါပြီ.
တစ်ဦး Rolex ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလာတဲ့အခါ, လက်ဝဲဘက်, မြို့ပြ၏ကိုယ်ခန္ဓာဒီဇိုင်းအတွက်အသေးစိတ်၏မရှိခြင်း, မှန်သော, ၎င်း၏နေရတယ်လို့ပုံစံကိုအလေးပေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါပတ်ပတ်လည်မျက်နှာပြင်ကရှင်းပါတယ်, တောက်တောက်နှင့်ပြဿနာများမရှိဘဲပြင်ပမှာဖတ်ရနိုင်. ဒါဟာစမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ချွန်ထက်မက, ဒါပေမယ့်စမတ်နာရီအပေါ်လက်ရှိရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအပြိုင်. ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာရှိသည်ပါဘူး, သို့သော်.
ဘက်ခြမ်းမှာခလုတ်ကိုမျက်နှာပြင်ထွန်းသို့မဟုတ်အိပ်ဖို့ကတတ်၏. နှစ်ချက်သတင်းစာကရုပ်ရှင်ရုံ mode ကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ကနေမျက်နှာပြင်ရပ်တန့်ဖို့. ကဆငျးသကျကျင်းပခြင်း setting များကို up menu ကိုဆောင်တတ်၏.
မြို့ပြ IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါသည်, သောက 1.5 ၏အနက်မှရေစိုခံမယ့်ဆိုလိုသည် 30 မိနစ်. အဆိုပါသားရေသိုင်းကြိုးကစိုစွတ်သောရတဲ့တားမြစ်ထား, သို့သော်, သင်မူကားအလွယ်တကူသတ္တုအဘို့အသိုင်းကြိုးသို့မဟုတ်ရော်ဘာတစ်ပွောငျးလဲနိုငျ. အဆိုပါထောက်ပံ့သိုင်းကြိုးခိုင်မာသောဖြစ်ပြီးအတွက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့တစ်ပါတ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကောင်းစွာဖန်ဆင်းခံစား.
မြို့ပြဆို microUSB charger ကိုမှတဆင့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း, ဒါပေမယ့်ဒါလုပ်ဖို့အထူးနည်းနည်းသံလိုက်အထိုင်လိုအပ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ, မြို့ပြတစ်ရက်နှင့်တာဝန်ခံတစ်ဦးလျှင်တစ်နှစ်ခွဲပတ်ပတ်လည်ကြာမြင့်. အမြဲအပေါ်မျက်နှာပြင်မရှိရင်, ဒါကြောင့်ကြာကြာတွေအများကြီးကြာ, ကောင်းစွာသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သို့.
သင်ကအားသွင်းဖို့အနည်းငယ်သံလိုက်အထိုင်လိုအပ်ပါတယ်, ဆုံးရှုံးရန်အခြားအရာအရာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အကြောင်းမှာလက်ပတ်နာရီစွဲချက် 1.7% တစ်မိနစ်, အရာအပြည့်အဝတာဝန်ခံကိုဆိုလိုသည်တစ်နာရီအောက်မှာကြာ.
အဆိုပါပြန်လည်အားသွင်းအထိုင်အတွက်တစ်ဦးနှလုံးခုန်နှုန်း sensor နဲ့အဆက်အသွယ်ဖုံးကွယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အထက်နှင့်စံ features တွေကိုကျော်လွန် Android Wear 5.1, မြို့ပြသင့်ရဲ့ smartphone ကိုတစ်ဦးနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာမှအဝေးကနေချိတ်ဆက်မှုအတွက် Wi-Fi ကိုလည်းပါဝင်သည်, သောကို manually activated ရဦးမည်.
အဆိုပါနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာအများဆုံးအခြားစမတ်နာရီအဖြစ်အကြောင်းကိုအဖြစ်တိကျမှုသက်သေပြ, ဒါကြောင့်မကြာခဏဆက်ကပ်အပ်နှံထားနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်ငါ့သွေးခုန်နှုန်း rated ပေမယ့်.
LG ရဲ့ apps များ
အဆိုပါ LG က Pulse app ဟာစဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးခုန်နှုန်းစာဖတ်ခြင်းပြပတ်ဝန်းကျင် mode မှာနှလုံးခုန်နှုန်းဖျောပွနိုငျ, နာရီအသုံးမရသောအခါ, ဒီသက်ရောက်မှုဘက်ထရီသက်တမ်းပေမယ့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
LG ကစံ Android Wear app များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပွားကြောင်း app အချို့လည်းပါဝင်သည်. LG က Pulse တစ်မိနစ်လျှင်တိုက်ရိုက်စည်းချက်နှလုံးခုန်နှုန်းဖတ်ကြားယူပြီးဖော်ပြပေး, သော built-in Google ကြံ့ခိုင်မှုတစ်ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်.
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသီးခြား app ကို download လုပ်ပါနဲ့ Bluetooth နားကြပ်ကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် LG ကခေါ်ရန်လည်းအသုံးပြုသူများချိတ်ဆက်စမတ်ဖုန်းအပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့ခွင့်ပြု. Android Wear ပေးထား 5.1 ယခုသငျသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှအသုံးပွုနိုငျတဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းလည်းပါဝင်သည်, စာသားမက်ဆေ့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့, ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်အဘယ်ကြောင့်ငါသေချာမရယ်.
မြို့ပြလည်း Android Wear ရဲ့အသစ် lockscreen လည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါကလက်ပတ်နာရီကိုချွတ်သောအခါတက်ကိုပြသရန်မရနိုင်, သာအခါအားလျော်စွာလက်ပတ်နာရီအားသွင်းသောအခါ.
အဆိုပါ LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြသေးစျေးအကြီးဆုံး Android Wear လက်ပတ်နာရီသည်, £ 260 ကုန်ကျ. ဒါက Moto ထက်£ 60 ပို 360 နှင့် Asus က Zenwatch ထိုထက်မျ​​ားနှင့်£ 35 ကပို G Watch R ကို. မြို့ပြ၏ထက်£ 40 စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည် နိမ့်ဆုံး-စျေးနှုန်းက Apple စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, သို့သော်.
သို့သော်ထိုသို့အစာရှောင်သည်, Android Wear 5.1 သည်ကြီး, အစဉ်အမြဲ-On screen ကိုလျောက်ပတ်သည်နှင့်သိုင်းကြိုးမဆိုစံ 22mm လက်ပတ်နာရီလက်ပတ်ကြိုးများအတွက်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
မြို့ပြအနဲ့ရငျးနှီးတဲ့လည်စည်းဖြစ်ပါတယ် Asus က ZenWatch နှင့် Sony ကစမတ်နာရီ3ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး Android Wear လက်ပတ်နာရီများအတွက်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်မစုံလငျင်.
အကောင်းအဆိုး: လျင်မြန်စွာ, အမြဲ-On screen ကို, နောက်ဆုံးပေါ် Android Wear, နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ, ဝိုင်ဖိုင်, အရည်အသွေးအသားရေလက်ပတ်နာရီလက်ပတ်.
Cons: တကယ်ပဲကြီးမား, ပုံစံကှဲဖြစ်ပါသည်, ထက်လျော့နည်းနှစ်ရက်ကြာဘက်ထရီ, အဘယ်သူမျှမပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာ, စျေးကြီး.
မြို့ပြအများအပြားယံအပေါ် featured လက်ပတ်ကြိုးမှ tapered အနားကဆင်းကင်းမဲ့. မြင်နိုင်နှစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အပေါက်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းများမှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
• Sony ကစမတ်နာရီ3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အလွန်ကြီးစွာသောဒီဇိုင်း, ကောင်းသော screen နှင့်လျောက်ပတ်သောဘက်ထရီ
Android မှာ, အပိုဒ်, LG က, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်နာရီ, Software များ, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← Android Wear 5.1 ဆန်းစစ်ခြင်း နယူး Self-ယာဉ်မောင်း Google ကမော်တော်ကား →